And this isanew ki - 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: and this isanew kind of watermelon (英語 - ビルマ語)
this isacollection of free clipart
ဤသည် အခမဲ့ clipart အတွက် စုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
there isanew version of gedit
gedit ၏ ဗားရှင်းအသစ်များ
and you said this isapressure in your chest
နောက်ပြီး ခင်ဗျားမှာ ရင်ဘတ်ထဲ ဖိအား ရှိနေတယ်လို့ ပြောတယ်
this isarequest for cooperation.
ကိုယ့်ဟာ​ကိုယ် သ​တင်း​ပို့​တဲ့ ဖြစ်​စဉ်​က နိုင်ငံ​ရေး​နည်း​လမ်း​တစ်​ခု​ပါ​ပဲ။
အရာရာ၌ အကျိုးကိုပေးတတ်သည်ဟူသော စကားသည် သစ္စာစကားဖြစ်၏။ အကြွင်းမဲ့ခံယူအပ် သော စကားလည်းဖြစ်၏။
in my opinion this isalittle flu
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ဒါဟာ တုပ်ကွေး အသေးစားပဲ
this isagroup of people "carrying out orders."
ပြောရရင် ကျွန်မတို့မှာ တရားဝင် ဆင်ဆာဖြတ်တယ်ဆိုတာမျိုး လုံးဝမရှိဘူး။
this is kurdish hunger for freedom, it is notanew concept.
ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ လွတ်မြောက်မှုတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တွေချီနေပါပြီ။
ဤရွေ့ကား၊ မောရှေသည် ဣသရေလအမျိုး သားတို့၌ ထားသောတရား၊
this isareal concern if you're trying to get out of an affected area.
ဤသည်မှာ သင့်အနေဖြင့် ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေသည့် နယ်မြေမှ ထွက်ခွာရန် ကြိုးစားနေသည်ဆိုလျှင် အမှန်တကယ်ဂရုပြုရမည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။
this isaproblem contained to the developing world.
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အများကြီး သက်ရောက်နေသော ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအမှုသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ သာမည အမှုဖြစ်သေး၏။ မောဘလူတို့ကိုလည်း သင်တို့လက်သို့ အပ်တော်မူမည်။
ဖါရောမင်းက၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို ရ၍ ဤကဲ့သို့သော သူကို အဘယ်မှာ ရှာ၍ တွေ့မည် နည်းဟု ကျွန်တော်မျိုးတို့အား မိန့်တော်မူ၏။
ခံရသောအလှူဟူမူကား၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊
and this is how the murderous regime will ultimately win, regardless of what political change awaits syria.
ဆီးရီးယားအတွက် မည်သည့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ စောင့်မျှော်နေစေကာမှု ဤပုံစံနှင့် လူသတ် အစိုးရစနစ်ကြီးသည် အဆုံးစွန်တွင် အနိုင်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဗိမာန်တော် တန်ဆာစာရင်းဟူမူကား၊ ရွှေ ဖလားသုံးဆယ်၊ ငွေဖလားတထောင်၊ ထားနှစ်ဆယ် ကိုးစင်း၊
အကယ်စင်စစ်ဆိုးသော သူ၏နေရာသည် ထိုသို့သော လက္ခဏာရှိ၏။ ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူ သည် ထိုသို့သော နေရာသို့ ရောက်လိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆိ၏။
ငါတို့အား ပေးတော်မူသောဂတိတော်မူကား၊ ထာဝရအသက်ကို ဝန်ခံတော်မူသောဂတိတော် ပေတည်း။
ဘာလစ်(ခ်) စိနသည် မလေးရှားနိုင်ငံ​ရေးသမားများ ပြောသည့် ရယ်ရပြီး လူမုန်းများသည့် ကောက်နုတ်ချက်အချို့အား စုစည်းတင်ပြသည့် ဝက်(ဘ်)စာမျက်နှာ အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်းအုပ်အရာကို တောင့်တသောသူသည် ကောင်းသော အမှုအရာကို တောင့်တသည်ဟုသော စကားသည် မှန်သောစကားဖြစ်၏။
élévateurs (フランス語>英語)unut (トルコ語>英語)utsättningens (スウェーデン語>英語)cek yang belum dikemukakan (マレー語>英語)mabubuo ulit ito (タガログ語>英語)klasės (リトアニア語>スペイン語)di nagbabayad ng buwis (タガログ語>英語)nagle (デンマーク語>ドイツ語)undersöka (スウェーデン語>スロバキア語)ker (スロベニア語>ドイツ語)llucet' (カタロニア語>スペイン語)generated by4visitors book (イタリア語>英語)tipka (クロアチア語>英語)papam (テルグ語>英語)odío (スペイン語>英語)ti faccio sapere (イタリア語>英語)nyenginezo (スワヒリ語>インドネシア語)vis coactiva (ラテン語>ポルトガル語)fanning (英語>オランダ語)nawr dyn ni'n (ウェールズ語>英語)plain housewife (英語>タガログ語)warmi suwa (ケチュア語>スペイン語)piecework (英語>アラビア語)体现不计党派分野的政治高度 (簡体字中国語>英語)